FOR: Babel Tower, Statue of uNebukadinesari, le European Parliament Tour. | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Izwe liye nelinabantu ngemva kukaZamcolo, amadoda wadala umbuso wakha esigodini Sennar a elinebhilidi elifika ezulwini.
Kodwa uNkulunkulu iphazanyiswe project yabo by ifiphele ulimi lwabo, bahlanganiswe kuze ke, wabangquzula ebusweni Zomhlaba.
Ngemva kwezinkulungwane zeminyaka, izwe liye nelinabantu emva kwempi yezwe yesibili, amadoda naphezu izilimi zabo ezahlukene wakha umbhoshongo entsha eStrasbourg ebonisa kabusha kombuso ka madoda.
Singabona ukufana imibhoshongo amabili elingaqediwe kanye igama yalo mbuso omusha okwenza akukho ngokuqondene noNkulunkulu kodwa unkulunkulu wamanga « LASEYUROPHU ».
Kunjengokungathi la madoda ayefuna ukuba ziphikise intando kaNkulunkulu futhi bayakuphika kuye ngokukhuluma konkulunkulu bamanga futhi othatha eziningana eminyakeni eyinkulungwane kamuva ukuvuselela yoMbuso babantu.
Impucuko yethu Western efanekiselwa kwakhiwa European okwaqala ngokubekwa umbuso Greek ziyowa nalo ukuphuma kini Greece kusukela zone Euro. (Alpha and Omega)
Singase sibe ezinye izimpendulo kula mavesi.
Daniel, Isahluko 2, ukuze 31-35
31 « Uzikhiphe, nkosi, umbono. Lapha: a sithombe, isithombe esikhulu, elikhanyayo ngokwedlulele, wema phambi kwakho, esabekayo ukubona.
32 Lokhu sithombe, ikhanda lakhe liyigolide elihle, isifuba saso nezingalo zesiliva, isisu saso namathanga ethusi,
33 imilenze yaso iyinsimbi, izinyawo zaso inxenye yinsimbi, inxenye nobumba.
34 Wabona: ngokuzumayo itshe elaqheshulwa ngaphandle isandla amkghwathile, batshaya sithombe, ezinyaweni zawo zensimbi nobumba, futhi wazihlephula.
35 Khona ephukile, konke ngesikhathi esisodwa, nebumba, nethusi, nesiliva, negolide, njengamakhoba esibuyeni ehlobo; umoya wakuphephula benganakwa. Futhi itshe lashaya isithombe laba yintaba enkulu futhi lagcwala umhlaba wonke.
Greece yena lo ngetshe elincane like kwesithombe uNebukadinesari, ngeke ukhiphe futhi ngehlise umbuso yeYurophu kuya babe sombuso impucuko entsha ngaphansi kokubusa kukaJesu Kristu!
Yini UNkulunkulu uyokwenza lokhu sikhathi, siyazi isiprofetho seBhayibheli kusukela enza nsuku zonke futhi kabani umphumela uyoba ukubuya kukaJesu Kristu Emhlabeni!
Futhi ukuthi uyeza maduze!
Umbuzo kumelwe sizibuze ingabe thina siyophunyuka ikakhulukazi yezinhlekelele ezimbi nezinhlekelele okuye kwagadla emhlabeni isintu futhi ukuthi siyobe ingxenye yibo lucky abayobona ukubuya ngokomzimba weNkosi yethu uJesu Kristu eNtabeni Yeminqumo .
Ukujabulisa Nodadewabo kuKristu yami ethandekayo ufuna ukuxhumana kahle konke oxhumana nabo lokhu kuhlobana sokuthola ngqo zonke izihloko zami: